Teknụzụ mbepụ - AOOD Technology Limited
Teknụzụ mbepụ ihe mgbe niile bụ isi ihe mmepe AOOD kemgbe anyị tọrọ ntọala. Anyị nwere teknụzụ mgbanaka mgbanaka elektrik iji dozie nsogbu nnyefe eletrik dị mgbagwoju anya na sistemụ dị iche iche. Anyị nwekwara ike ijikọ ya na njikọta eriri fiber optic / coax rotary anyị iji nye ndị ahịa anyị ngwanrọ ngagharị ngagharị zuru oke yana ezigbo arụmọrụ na ntụkwasị obi.
N'ime afọ iri abụọ gara aga, anyị na-elebara anya nke ukwuu maka mgbanaka mgbanaka na ngwa dị elu. Na mpaghara nchekwa, anyị nwere ike jiri amamihe jikwaa puku kwuru puku ike dị elu na sekit data na oghere pere mpe, wee hụ na mgbanaka mgbapụ ndị a ga -enwe arụmọrụ dị elu na ntụkwasị obi na gburugburu ebe siri ike. Anyị mepụtara ọbụna usoro mgbaaka obere kapsule agha iji zute akara nke ọtụtụ ụzọ na mkpa nnyefe data na oghere pere mpe. N'ọhịa mmiri, anyị nwere ike ịnye ngalaba mgbanaka mgbanaka ROV agbakwunyere yana njikọta eriri optic rotary na nkwonkwo rotary mmiri, kpuchie ya na IP68 na mmanụ juputara maka ọrụ subsea. N'ọrịa ahụike, nnukwu mgbaaka pancake anyị nwere maka ihe nyocha CT nwere ike inye ihe ruru 2.7m site na nnyefe data na-enweghị oke> 5Gbits.